Mila amafisina izay mampiombona… | NewsMada
Mila amafisina izay mampiombona…
Hanao ahoana ny hiafaran’ny fitakiana ireo Nosy malagasy mbola giazan’ny fanjakana frantsay hatramin’izao? Ho hita eo… Mandra-pitranga izay hitranga, mahavalalanina ny afitsoky ny mpanao politika sasany amin’izao: odian-tsy hita ny raharaha ka tsy miteny tsy miseho izy ireo.
Nefa na inona mitranga sy atao hatramin’izay, saika tsy mitsaha-mampiaka-peo sy manao izay isehoana izy ireo. Aleo mangina sy tsy miseho sao hoe manohana fitondrana? Tsy amin’ny raharaha lehibe toy izao fitakiana ny fiandrianam-pirenena izao ve no tena isehoana sy itabatabana?
Amin’izany, tena misy sy iainana ary lalim-paka sy maharitra ny hoe fitiavan-tanindrazana… mampihetsika sy mampitabataba lava izay ela izay. Nahoana no minia mangina sy tsy mihetsika amin’izao? Mety eo ny fitsarana ambony ihany na ny fanahiana fa karazana sarinady ny raharaha?
Nefa izay karazana sarinady izay, raha izay tokoa, sanatria, no tena mandona sy manetsika hambompo, ho hitan’ny havany eo izay manao fihetsiketsehana ivelany. Ady fiady ny fiandrianam-pirenena sy ny harem-pirenena, tsy ananan-kavana. Iza ny tena tia tanindrazana amin’izany?
Raha tsy izany, mety mbola eo ny fiheveran-diso? Toy ny hoe hahomby amin’ny fitarihana izao fitakiana ireo Nosy malagasy izao ny mpitondra amin’izao fotoana izao ka ho ratsy toerana ny tena noho ny maha mpanohitra, ohatra, na ny tsy fitoviam-pijery. Tsy inona fa kajikajy politika.
Amin’izay kajikajy sy paipaika politika izay, ny tsy mampitovy fijery hatrany no ifanenjanana sy ifanenjehana: fitsitokotokoana, fizarazarana. Tsy mahagaga raha manjakazaka ny vahiny rehefa tsy miray hina sy mifandamina amin’izay tokony hiombonana sy hampiombona ny samy Malagasy.
Tia tanindrazana ve ny Malagasy? Na misy ny Malagasy tia tanindrazana… Raha lasan’ny hafa ny tany, ahoana ny hampiraisana ny tanindrazana? Iray tsy mivaky, tsy amidy sy tsy atakalo… Mila firaisankina, fifampitokisana, fiaraha-mijery ny tombontsoa ambonin’ny firenena… Mby aiza?